के मैले एकसाथ धेरै Hotspot Booster र Turbo Booster सब्सक्राइब गर्न सक्छु ?
सक्नुहुन्न, एकै प्रकारको Booster हरूको एकैसाथ खरिद गर्ने अनुमति छैन र नयाँ बुस्टर सब्सक्राइब गर्नुभन्दा पहिला तपाईंले आफ्नो हाल प्रयोग गरिरहेको Booster को कोटा वा वैधता अवधिसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, तपाईंले एकसाथ2वटा Hotspot Booster हरू सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्न । यद्यपि, तपाईंले Hotspot Booster र Turbo Booster दुवैलाई एकसाथ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । दुवै Boosters को सब्सक्रिप्सन गरेको खण्डमा, प्रयोग हुने हटस्पटको खपत Hotspot Booster को प्याकेजबाट हुनेछ र तपाईंले आफ्नो अनलिमिटेड डाटा कोटाको मजा स्पिड सीमाबिना लिन सक्नुहुन्छ ।
मैले अन्य add-ons रोजे वा GX12/GX30 लाई अनसब्सक्राइब गरे भने मेरो Hotspot Booster र Turbo Booster को कोटा वा वैधता अवधिको के हुन्छ ?
तपाईंको Boosters को बाँकी रहेको कोटा वा वैधता अवधि हट्नेछ । प्रयोग नभएको कोटा वा वैधता अवधिको रिफण्ड दिइने छैन ।
मैले Hotspot Booster र Turbo Booster लाई कसरी सब्सक्राइब गर्न सक्छु ?
तपाईंले बुस्टरहरूलाई निम्न माध्यमहरूद्वारा सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ:
MY UMobileApp - Add-Ons मेनु
UMB - *118*1# डायल गर्नुहोस्
SMS - 28118 मा ON TURBO (Turbo Booster का लागि) वा ON HOTSPOT (Hotspot Booster का लागि) पठाउनुहोस्
के मैले अझै पनि RM10 मा3दिन मान्य रहने 1GB को हालको स्ट्यान्डर्ड Booster सब्सक्राइब गर्न सक्छु ?
सक्नुहुन्छ, तपाईंले अझैपनि Hotspot र Turbo Booster सहित स्ट्यान्डर्ड Booster सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, कृपया ध्यान राख्नुहोस् कि यी3Boosters हरूको वैधता अवधि सफल सब्सक्रिप्सनपछि मात्र लागू हुन्छ । तपाईंको प्लान पहिल्यै अनलिमिटेड डाटा कोटासहित आउने भएकोले हामी तपाईंलाई सधैं स्ट्यान्डर्ड Booster को सट्टामा Turbo Booster सब्सक्राइब गर्न सल्लाह दिन्छौं ।